အတွင်းသား ကောက်ကြောင်း အလှလေးတွေ ပေါ်လွင်အောင် ဆက်ဆီကျလွန်းနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် အယ်လာရဲ့ အမိုက်စားပုံလေးများ – Online News Post
အတွင်းသား ကောက်ကြောင်း အလှလေးတွေ ပေါ်လွင်အောင် ဆက်ဆီကျလွန်းနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် အယ်လာရဲ့ အမိုက်စားပုံလေးများ
By Cele MinPosted on January 13, 2021 January 13, 2021
အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ တက်သစ်စ မော်ဒယ်လ် အယ်လာ ကို သိကြ မယ် ထင်ပါ တယ် နော် ။ မော်ဒယ်လ် လော က ကို ဝင်ရောက် တာ မကြာသေး ပေမယ့် ပရိသတ် အများအပြား ရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှု ကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြစ်ပါ တယ် … . ယောကျာ်း လေး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ဝန်း ရံ အားပေးမှု ရရှိထား တဲ့ သူမက တော့ ဆိုရှယ် media လောက မှာ နာမည် တစ်လုံး နဲ့ ရပ်တည် နေသူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။
သူမ ရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက် စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့ အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင် သူလေးဖြစ် တာကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာမှာ ရေပန်းစား လူကြိုက် များကာ ပုရိသ တွေ ဝန်းရံနေကြ တာ လည်းဖြစ် ပါတယ် ။ သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေ ကို လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်ပေါ် တွင် အများ ဆုံး တင်လေ့ ရှိ တာတွေ့ ရ ပါ တယ် ။
ပုံလေးတွေ တိုင်း မော်ဒယ်လ် အယ်လာ တစ်ယောက် ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိနဲ့ လန်းလွန်း နေတာ ည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမက တော့ ဆက်ဆီကျကျ ရိုက်ထား တဲ့ လန်းလွန်း တဲ့ ပုံလေး ကို “မင်းရဲ့ အချစ်များ အမြဲတမ်းကိုယ့် အတွက်ပါ ” caption လေးနဲ့ တင်ပေး လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊၊ မော်ဒယ်လ် အယ်လာ ရဲ့ အလှ ပုံရိပ် လေးတွေ ကို ပရိတ်သတ် တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေ ပေး လိုက် တယ်နော် … .
photo : Ella
အမိုက္ စား ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ တက္သစ္စ ေမာ္ဒယ္လ္ အယ္လာ ကို သိၾက မယ္ ထင္ပါ တယ္ ေနာ္ ။ ေမာ္ဒယ္လ္ ေလာ က ကို ဝင္ေရာက္ တာ မၾကာေသး ေပမယ့္ ပရိသတ္ အမ်ားအျပား ရဲ့ အားေပး ဝန္းရံမႈ ကို တျဖည္းျဖည္း ရရွိလာတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ ျဖစ္ပါ တယ္ … . ေယာက်ာ္း ေလး ပရိသတ္ေတြ ရဲ့ ဝန္း ရံ အားေပးမႈ ရရွိထား တဲ့ သူမက ေတာ့ ဆိုရွယ္ media ေလာက မွာ နာမည္ တစ္လုံး နဲ႔ ရပ္တည္ ေနသူ တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။
သူမ ရဲ့ ဆက္ဆီ က်ၿပီး အမိုက္ စား ပုံေတြ နဲ႔ ညိဳ႕ အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ နိုင္ သူေလးျဖစ္ တာေၾကာင့္ လက္ရွိ ေဖ့ဘြတ္စာ မ်က္ႏွာမွာ ေရပန္းစား လူႀကိဳက္ မ်ားကာ ပုရိသ ေတြ ဝန္းရံေနၾက တာ လည္းျဖစ္ ပါတယ္ ။ သူမရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေတြ ကို လူမႈကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ေပၚ တြင္ အမ်ား ဆုံး တင္ေလ့ ရွိ တာေတြ႕ ရ ပါ တယ္ ။
ပုံေလးေတြ တိုင္း ေမာ္ဒယ္လ္ အယ္လာ တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိရွိနဲ႔ လန္းလြန္း ေနတာ ည္းျဖစ္ပါတယ္။ သူမက ေတာ့ ဆက္ဆီက်က် ရိုက္ထား တဲ့ လန္းလြန္း တဲ့ ပုံေလး ကို “မင္းရဲ့ အခ်စ္မ်ား အျမဲတမ္းကိုယ့္ အတြက္ပါ ” caption ေလးနဲ႔ တင္ေပး လာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊၊ ေမာ္ဒယ္လ္ အယ္လာ ရဲ့ အလွ ပုံရိပ္ ေလးေတြ ကို ပရိတ္သတ္ ေတြ အတြက္ ျပန္လည္ မၽွေဝ ေပး လိုက္ တယ္ေနာ္ … .
Previous post ရွှေရင်နှစ်မွှာကို အထင်းသား လှစ်ဟပြလိုက်တဲ့ သဇင်ဦးရဲ့ အကြမ်းစား ပုံရိပ်လေးများ
Next post ပုရိသတို့ ရင်ခုန်သံမြန်သွားစေမယ့် နန်းအမရာရဲ့ ဆက်ဆီကျကျလေး ရိုက်ထားတဲ့ ချစ်စရာ ဗီဒီယိုလေး